ZTE Blade V9 wuxuu la yimaadaa shaashadda 18: 9 iyo Snapdragon 450 | Androidsis
ZTE wuxuu ka mid ahaa shirkadaha sida weyn u caabbiyay qaadashada mid ka mid ah isbeddellada ugu caansan ee suuqa taleefannada casriga ah, waxaan tixraaceynaa 18: 9 shaashadood oo saameyn badan ku yeeshay taleefannadii cusbaa ee soo baxay sanadkii 2017.
Si tan loo beddelo, ZTE wuxuu diyaariyaa bedelka Blade V8 ... Waxaan ka hadleynaa ZTE Blade V9, Taleefan leh processor Qualcomm Snapdragon 450 iyo shaashadda xallinta qaabdhismeedka 18: 9.
Moobaylkani wuxuu qayb ka noqon doonaa qaybta dhexdhexaadka ah ee 'ZTE' Iyo, cusbooneysiinta shaashadda 18: 9 ee ay isku dhafan tahay, waxay ballanqaadaysaa inay sannadka soo socda ku bilaabi doonto cagta midig, taas oo aan wax badan ka rajeyneyno soo saaraha casriga ee Shiinaha ee ZTE.
1 ZTE Blade V9 qeexitaannada iyo astaamaha
ZTE Blade V9 qeexitaannada iyo astaamaha
Terminal-kan waxaa ku shaqeeya processor processor Qualcomm Snapdragon 450 laga bilaabo 14nn siddeed koronto illaa 1.8Ghz (8 Cortex-A53 cores) oo wata Adreno 506 GPU.
Xagga ismaamulka taleefankan casriga ah, 3.200mAh ayaa noqon doona waxa daaraya nalalka.
Ku saabsan RAM, Blade V9 wuxuu ku imaan doonaa seddex nooc oo kala ah 2, 3 iyo 4GB oo leh meel kayd ah oo ah 16, 32 iyo 64GB siday u kala horreeyaan, oo lagu ballaarin karo kaarka microSD.
Taleefankan casriga ahi wuxuu la yimaadaa 16MP + 5MP kamarad gadaal leh oo leh Flash Flash iyo, tan agteeda, dareeraha sawirka faraha.
Dareemaha ugu muhiimsan wuxuu leeyahay fur f / 1.8 oo diirad otomaatig ah iyo muraayad 6P ah si sawirro fiican looga qaado iyo, tan labaad, diirad go'an Intaa waxaa dheer, dhinaca hore, waxay leedahay dareeraha 13MP ee sawir-qaadaha.
Ku saabsan shaashadda, mobiilkani wuxuu leeyahay guddi 18: 9 ah oo 5.7 inji ah FullHD +.
Blade V9 wuxuu leeyahay Android 8.0 Oreo, Qalabka codka ee 3.5mm oo dusha sare ah, helitaan laba SIM ah iyo dekedda micro USB ee hoose.
Telefoonka ayaa culeyskiisu yahay 140g waxaana cabirkiisu yahay 151.4 x 70.6 x 7.5mm.
Si rasmi ah looma shaacin ZTE Blade V9, markaa qiimo ma hayno, laakiin waxaa la filayaa in waqti dhow lagu dhawaaqo.
Waxay ku imaan doontaa laba nooc oo midabbo kala duwan: Madow iyo Dahab.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » ZTE Blade V9 wuxuu la yimaadaa shaashadda 18: 9 iyo Snapdragon 450
Sideed u aragtaa Blackview S8? Waxay kuxirantahay waxa aan raadinayo qiima ahaan, € 127 waxay umuuqataa mid layaableh Ma jiraa qof qaba?
Nokia 3310 oo wata 4G ayaa imaan doona sanadka 2018
4-ta bisha Janaayo, Samsung waxay soo bandhigi doontaa processor-ka Exynos ee maamuli doona Galaxy S9